QM: 5 milyan oo Soomaali ah ayaan haysan cunto ku filan - BBC News Somali
Image caption 5 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaan haysan cuno ku filan
Shan milyan oo qof oo Soomaali ah una dhiganta in ka badan 40% tirada guud ee Soomaalida ayaan haysan cunto ku filan sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta laga soo saaray magaalada Muqdisho, oo ay shaacisay Qaramada Midoobay.
Dadkaasi waxaa ku jira 300,000 oo carruur ah oo da'doodu ka hooseyso shan sano, kuwaas oo ay hayso nafaqo darro iyadoo in ka badan 50,000 oo carruurtaasi ka mid ahna ay hayso nafaqo darro aad u ba'an.
Image caption Qaramada Midoobay ayaa warbixintan ku soo bandhigtay Muqdisho
Yabooha Qaramada Midoobay
Warbixintan ugu danbeysay ayaa ku kordhisay 300,000 oo qof tirada hubanti la'aanta cuntadu haysay warbixintii tan ka horreysay ee la soo saaray bishii February ee sanadkan.
" Kooxaha gargaarku waxay u diyaarsan yihiin in ay labo jibbaaraan jawaab tooda ku aadan caawinta qoysaska la halgamaya in ay helaan cunto si ay ugu moodaan maalintii", sidaas waxaa shir jaraa'id oo Muqdisho lagu qabtay ka sheegay Iskduwaha Bini'aadannimada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Peter de Clercq isagoo intaa ku daray "Qorasha ka jawaab celinta xaaladda bini'aadannimo ee Soomaaliya ee 2016 waa 32% qarashka loo hayay, waxaana loo baahanyahay dhaqaale degdeg ah si kor loogu qaado jawaab celinta iyo dadaalada lagu doonayo si waxtar leh in loo abbaaro nafaqo darrada iyo si loo helo cunto", ayuu yiri Peter de Clercq.
Dadaallada lagu yareynayo nuglaanta ayaa sii socda iyadoo taasi ay daciifisay isbadalka cimilada taasoo saamaysay xaaladda cuntada iyo nafaqada.
Wax soo saarka dalaga ayaa wanaagsanaa qaybo ka tirsan Somaliland taasina waxa ay keentay in ay gacan kagaysato koboca miraha meelaha ay abaaruhu horey u saameeyeen.
Si kastoo ay ahaataba xaaladaha abaaraha ayaa wali ka sii jira deegaanno ka tirsan Somaliland iyo Puntland. Roobabka oo aan wanaagsanayn konfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa keenay in ay yaraato dalagyada wax soo saarka.